सरकारले रोजगारीको लागि रोक्का गरेको विदेशी ६३ कम्पनीहरु यी हुन् ! थाहापाइराख्नुस् !
असोज २६, २०७५ बिगुल
काठमाडौँ- रोजगारीको लागि विदेश जान चाहनेहरुले नेपाल सरकारबाट खुल्ला गरिएका देशहरुमा जान पाउने प्रावधान रहेको छ। नेपाल सरकारले एक सय १० वटा मुलुकमा कामदार पठाउन खुल्ला गरेको छ।
प्राय जस्तो नेपाली युएई, मलेसिया, कतारका, साउदी लगायतमा वैदेशिक रोजगारको लागि जाने गर्छन्। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको
वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न देशमा रहेका कम्पनिहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा राखेका कम्पनिहरु मात्रै ४ देशका रहेका छन्। धेरै जस्तो नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारको लागि जाने युएई, मलेसिया, कतारका, साउदी लगायतका ४ देशका विभिन्न ६३ कम्पनिलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
यी ६३ कम्पनि विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त भएको कारण कालोसूचीमा वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा राखेको छ। यी कम्पनिमा काम गर्न चाहनेहरुलाई वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति नदिने गर्छ।
कालोसूचीमा परेका मध्ये युएईका ३ कम्पनि, मलेसियाका ५२ कम्पनी, कतारका ३ र साउदीका ५ कम्पनीहरु रहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले कालोसूचीमा राखेका कम्पनीको पूर्ण विवरणको लागि निम्न रहेको तस्विर हेर्नुहोस् :
तथ्याँक वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन साइटबाट लिइएको हो !
प्रकाशित : शुक्रबार, असोज २६, २०७५१०:३२
दशैँ विदामा नवलपुर जिल्ला अदालत खुला